Jean Nirina -filohan�ny HAFARI Navoaka hitsabo tena ivelan'ny fonja
Navoaka hitsabo tena ivelan'ny fonja ny filoha nasionalin'y fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina, taorian'ny baikon'ny lehiben'ny fampanoavana etsy amin'ny Fitsarana Anosy
. Taorian'ny fizahana nataon'ny dokotera ao amin'ny hôpitaly Befelatanana ka nahitan'ny lehiben'ny mpitsabo eny anivon'ny fonja ny fihomboan'ny aretiny no antony nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Naiditra hôpitaly ety ivelany araka izany ny tenany ka ireo mpikambana ao amin'ny HAFARI avokoa no hiantoka ny lany rehetra amin'izany. Ankoatra ity filoha nasionalin'ny HAFARI Malagasy ity dia fantatra fa betsaka amin'ireo voafonja ao Antanimora no mila fanaraha-maso akaiky ety ivelany ny toe-pahasalamany. Efa tena tsy ampy mantsy ireo karazam-panafody tonga eny amin'ny fonja ankoatra ny fahateren'ny foto-drafitrasa izay efa tena tsy mifanaraka amin'ny filàn'ny voafonja tsirairay intsony. Vavaka andro aman'alina araka izany no hasetrin'ireo voafonja izany mba hanomezan'ny filoham-pirenena azy ireo famotsoran-keloka faobe amin'izao ankatoky ny fetin'ny Krismasy sy ny faran'ny taona izao, indrindra fa ireo gadrabe. Raha araka ny fantatra hatrany mantsy dia tsy mba nisitraka izany mihitsy ireto farany hatramin'izay. Hangatahin'izy ireo ihany koa ny hanomezana alalana ny voafonja mba hiasa ety ivelany ho an'ny voatsara ny fanomezana fahafahana arahina fepetra ho an'ireo voafonja nahaefa ny an-tsasaky ny saziny izay marihina fa làlana velona misy eto amin'ny firenena.